Yakagadziridzwa TPE mota mameti runyorwa runyorwa munaKurume 2021
Isu Shaoxing Huawo Auto Zvikamu Co, Ltd inonyanya kugadzirwa kwemamota emota. Tinogona kugadzirisa mamodheru emamota emota nekukurumidza sezvazvinogona. Kana mhando dzemota dzaunoda dzisingasanganise mune yedu yemhando runyorwa, ndapota taura nesu kamwechete, uye isu tinogona kuzvipedza nekukurumidza, zvakare gamuchira kana iwe uine 3D laser ...
Kana tichida kutenga matenga epasi pemota, nzira yekuwana yakanakisa inogadzira. Unogona kutsvaga muGoogle ne "mota mats fekitori", ipapo unogona kuwana mawebhusaiti mazhinji, uye unofanirwa kutonga kuti ndeipi fekitori yemota yaunoda, uye kutarisa izvo zvematsipa emota ndizvo zvaunoda. Kune mumwe murume akasiyana mutsa ...
ne admin pane 21-02-09
Zvinhu zvakasiyana uye zvivakwa zvemota zvepasi zvine nzira dzakasiyana dzekuwachisa. Iko kuomesa kwekuwacha kwakasiyanawo, iwo mateki emota izvozvi anowanzo neakasiyana zvinhu izvi: kapeti, matai emota matira, pvc mateki emota uye TPE / TPR mateki emota. Ngatitsanangurei chii chakasiyana pane washin ...
Mashandisiro aunoita yako yepasi mateti yemakore makumi maviri emakore?
Kana iwe ukava amai, iwe unogona kunyatso kubatikana zuva nezuva kuona kuti wese mumhuri ari kuchengetwa zvakanaka. Iwe hauna nguva yekuchenesa imba, zvakare hauna nguva yekuchenesa mota yako. Nguva inoreva zvese, haugone kana kumbomira kweminiti, unofanirwa kutsvaga nzira yekuzvipa zororo. Pa ho ...
Nzira Yokusarudza Sei Mateki Emotokari Yako Mota?
Kana iwe ukatenga Imotokari nyowani, unofanirwa kutenga mameti emota panguva imwe chete.We Huawo auto parts Co, Ltd inopa akasiyana siyana mateki emota uye trunk mat kuti tidzivirire mukati memota yako.Tichazivisa kuti ndeapi akanakisa epasi mats zvako. Ndeapi matauro epasi pemota akakodzera mota yangu? Paunoshanyira yedu isu ...
Tine mamodheru emota mangani?
Huawo Auto Zvikamu Co, Ltd ndeye TPE mota mateki fekitori inogadzira akawanda maforoma emota mateti uye trunk mat. Tine mateti emota uye trunk matanda muforoma yeToyota, Honda, Land Rover, BMW, Jeep, Porsche, Mercedes-Benz, Chevrolet, Cadillac, Ford, Nissan, Lexus, Audi, Das Auto, Volvo, Jaguar, KIA, Mazda, Tesla , Mitsubishi Motors, Bui ...
Nei TPE zvinhu zvichikwanisa kushandisa muMotokari maindasitiri
Kubva pamacheya ekare sedan uye ngoro kusvika kumotokari dzazvino, maturusi ekufamba kwevanhu anga achivandudza. Kuti ugare wakasununguka, TPE mota mats fekitori yakaburitsa TPE mota mateti akaonekwa mune veruzhinji maonero. Thermoplastic elastomer TPE inogadzirwa neSeB base zvinhu zvakasanganiswa nemafuta machena uye oth ...
TPE mateki emota zvinhu: ndezvipi zvakanakira TPE mota mateti zvinhu?
TPE iri mhando nyowani yezvinhu zvakasvibirira zvine kukwirisa uye simba rekumanikidza. Zvinoenderana ne ductility yekugadzira uye kugadzirisa TPE zvinhu zvinogona kugadzirwa kuti zviitwe zvakasiyana. Ikozvino, matai eTPE epasi atove imwe yezvakakosha zvigadzirwa mumunda wekugadzira uye ...
Rudzii rwematauro emota anodikanwa anofarira nyika!
Mateki emota akakosha mukutyaira kwezuva nezuva, muchinjikwa-nyika zvakare tora mutoro wekurwisa-kutsvedza uye chengetedza muviri wemota. Panguva imwe chete, kuchinjika kuri kushoma, unde ...
TPE mateki emota ndiwo mafambiro mune ramangwana
Maturu epasi pemota anozivikanwa kune wese muridzi, zvisinei hazvo kuti ichibva kuchitoro che4S sechipo, kana kuzvitengera, mateti emota ndiyo yekutanga mota yemukati yaunoda. Sekuunganidzwa kwemvura isina mvura, anti-fouling, anti-slip, mota yekudzivirira mune imwe yemota yepasi mat, mumusika wemotokari ...
Pedyo kubata pasi mazuva ese, maitiro ekuchenesa iyo YeMota hub?
Mota yakatanga kunge mudziyo wekufamba, saka iri kumhanya kunze kwemazuva ese, kune marudzi mazhinji epasi nharaunda, dzimwe nzvimbo dzine matope akawanda kana guruva, rakasviba kwazvo, saka hub yemota yakasviba kwazvo, hatigone kumira izvo, saka sei kuchenesa mota hub? Rega Shaoxing Huawo Auto Zvikamu Co ....
Nzira yekusarudza sei kukora kwemataiti emota?
Iye zvino ingangoita mhuri yese ine mota, uye wese muridzi wemota anoda mota yake.Kuti vachengetedze mota yakachena, vachatenga mhando dzese dzemidziyo yemota, matsoka emota tsoka akakosha, asi ukobvu hwemataiti epasi pemota zvakare zvakasiyana, saka ndeupi ukobvu wakakodzera? Mota tsoka tsoka dzinosiyana mu thi ...
Yakagadziridzwa TPE mota mameti runyorwa runyorwa munaKurume ...